Molo, wonke umntu, zikho iindaba ezilungileyo zethu sobabini kunye nawe, siphuhlise umyili omtsha wesitayile sokulungisa. Imifanekiso yereferensi yakho njenge,
Ezi ziimveliso zethu ezintsha, zihlala kamnandi xa unxiba, kwaye zisebenza kakhulu kwi-posture corrector.
QHUBEKA NENKXASO YOBUGCISA BENKONZO YABADLALI NABABELASELULA-Ngaba uhlala phambi kwekhompyuter kangangeyure okanye ngaba uyakhathazeka kwaye ubuhlungu emqolo nasemagxeni? Sukuba nexhala; Kuthetha ukuba umqolo osemva uyasebenza kwaye ulungelelanisa umqolo wakho ngendlela ebekufanele ukuba kunjalo! Isilungisi sesimo somzimba sinikezela ngenkxaso efunekayo kakhulu ukuba umzimba wakho ufuna ukuphucula impilo yakho yomnqonqo kunye nokuma kwawo.
YEMPILO NOKUQINISA IMBALI: Ukusekwe kuyilo lwe-Ergonomics, i-postace brace ikwenza ukuba ukwazi ukubuyisela umva ngokuthe ngqo kwaye uqinise amahlombe akho, intamo kunye nomva, ukudala ukuma okuhle, ukuphucula intlungu entanyeni, egxalabeni, ngasemva ngasemva kwaye utshintshe imikhwa emibi ukulala. Nokuba ufuna ukuphinda wenzakale ekulimaleni okanye ufuna ukuphucula isimo somzimba, i-SR ilapha ukukunceda. Sebenzisa i-strap yokulungelelanisa ye-posture ukulungisa i-vertebrae yakho, ukomeleza imisipha yakho, kunye nokubuyela kwakhona!
UMGANGATHO WOBUGCISA OBENZELAYO: ISIQINISEKILEYO se-SR sokumisa kwakhona, sebenzisa izinto ezinobunzima, ezithambileyo, ezinomdlandla ogcina ulusu lwakho lusempilweni. Isikhephe esinqabileyo senziwe ngezinto ezinqumlayo ezinokuphawuleka phantsi kweengubo. I-clavicle brace ayibangeli kukhathazeka kwesikhumba okanye ukubila, inokunxiba ekhaya, emsebenzini, okanye kwindawo yokuzivocavoca.
INKXASO YOKUXHASA IMIFANEKISO: Ubungakanani beLizwe liphela. Isibini sokubuyela umva sinemitya evumayo yokubulela ilungele ulutsha kunye nabantu abadala, amadoda nabafazi. Kukho isithuba esifubeni sama-33 "- 47" esifubeni. Ngoku ukuba imeko yakho sele iphucukile kwaye nezihlunu zakho zangasemva ziziva zomelele, unesinyathelo esinye ENYE ekufuneka uhambe ngaso. Sebenzisa ukubuyisela ukuhambisa kunye nokugqibezela inkqubo yakho yokuphilisa!
Kutheni ulungiso lwe-posture Corrector lubalulekile kumadoda nabafazi?
Izenzo njenge-clavicle brace ukubonelela ngenkxaso yokuma kwe-clavicle ngelixa usebenza, ukuphakamisa, ukuhlala kwidesika yekhompyuter, ukusebenza eofisini, njl.
Ukuphucula inkumbulo kunye nokufunda kwaye Yenza ukuba ubonakale umde, umncinci kwaye umtsalane.
Yenza ukuba ujongeke unethemba kwaye unamandla kwaye uphucula ulungelelwaniso lomzimba Ukwahlula iintlungu zangasemva nasemqaleni kunye Nokuphucula ukuphefumla.
Unokunxiba ngokulula phantsi kwehempe xa usemsebenzini kwaye ungabonakali ngokupheleleyo phantsi kweengubo zakho.
Siphucule i-thoracic pain yokulungisa yethu ethintela ukunkcenkceshela kunye nokuphazamiseka kwaye inika ulungelelwaniso lwamagxa.
Umkhwa wethu we-clavicle fracture owenziwe kwiinightweight, ezinokuphefumla eziphezulu.
Ungaqhubeka njani nokunxiba i-cosmetologist yakho yangasemva, ukufumana ukuma kwendalo?
Ngokulula, qala ngokuyinxiba imizuzu engama-20 ukuya kwengama-30, qala ngokuthe ngcembe ixesha elongeziweyo ulinxibe ngemizuzu emi-5 ukuya kweli-10, kwaye unyuke uye kwi yure enye ngosuku.
Ngale nto, iya kwenza ukuba isigxina sakho sigqibelele kwaye kuya kufuneka ke ukuba sinxibe ngamanye amaxesha.
Ixesha lokuposa: Aprili-18-2019